Uma ususe eminye imiyalezo kubaluleke kakhulu lapho bethulula ibhokisi yakho ye-SMS. Kufanele senze izinto ngokushesha. Ngenxa bethulula ibhokisi lakho SMS akusho ngempela ukususa imiyalezo, ke nje emfihlela umbono ngokushesha. Ngakho kusadingeka ithuba ukuze ngiphinde ngibabone, noma bona izocishwa enye into. Lapha sizokubonisa indlela alulame imiyalezo yombhalo asusiwe kusukela kufoni yakho ye-Android.
Indlela ukuze alulame idatha isusiwe kusuka ku-Android
Indlela ukuze alulame izithombe elahlekile Android
Amathuluzi ukuze siphinde sithole kusulwe imiyalezo
Kukhona amathuluzi PC ezahlukene kanye Mac ezisekelwe ingakusiza, futhi ngokuyisisekelo ukwenza into efanayo: ukuxhuma ifoni yakho ye-Android ekhompyutheni yakho, scan imemori Android yakho, ke bona abuye alulame imilayezo asusiwe. Lapha sethula ithuluzi Android Data Recovery: Dr.Fone-Android.
Ngemva thwebula uhlelo Android Data Recovery. Thina kusadingeka ukwenza okuthile.
Baqede Android yakho kungcono, kodwa akusho lokho ngempela.
Shaja ifoni yakho, ukuqinisekisa ibhethri zalo ezingaphezu kuka 20%.
Indlela Phinda ezisusiwe imiyalezo kusuka ku-Android
Manje ake qala inqubo yokutakula. Uzothola kube lula kakhulu futhi kulula ukusebenza.
Inothi: Sicela musa ukusebenzisa esinye isofthiwe ukuphathwa Android ngesikhathi yonke inqubo yokutakula.
Step 1: Qalisa i-Android Data Recovery iyithuluzi futhi ukuxhuma idivayisi yakho kwikhompyutha.
Xhuma ifoni yakho ye-Android noma ithebhulethi kwikhompyutha yakho nge-USB. Uhlelo sizobonisa ukuthi ixhuma nedivayisi yakho. Uhlelo lokusebenza okuthiwa MobileGo izofakwa ku-Android yakho ukuze kuqinisekwe ukuthi uxhumano nokululama inqubo.
Step 2: Khetha izinhlobo ifayela ukululama
Kungaba alulame 8 izinhlobo ifayela, sicela uphawu Imibiko bese uchofoza Okulandelayo. Uma ufuna ukuthola i-abanye noma, bese ubeka uphawu kuzo zonke.
Uma ungakwazi ukubona idatha elahlekile isisusiwe, ungakhetha kuphela scan yamafayela asusiwe. Noma kufanele zama enye imodi ukuskena.
Inothi: nokuskena amafayela kusulwe kuphela kuzothatha isikhathi esingaphansi.
Step 4: Ukulungele ukuqalisa
Ithuluzi yokutakula ngeke ngokuzenzakalelayo baqede idivayisi yakho ukuze alulame isamba esiphezulu idatha. Ngemva inqubo yokutakula idivayisi yakho ngeke ubuyele isimo unrooted. Chofoza Qala.
Step 5: Iskena Android yakho
Uhlelo uzoqala ngokuhlaziya kudivayisi yakho, bese uzama ukuthola ukugunyazwa impande. Kumele uvule kudivayisi yakho iphinde ivumele uhlelo SuperSU requrest.
Step 6: Buka kuqala bese alulame okuqukethwe asusiwe
Dr.Fone-Android ngeke uhlu konke okuqukethwe ukuyithola. Ungahlola kuqala kubo bese unquma ukuthi yini ofuna alulame. Thikha kubo bese uchofoza Buyisa. Idatha walulama uyakusindiswa njengoba HTML noma ifayela TXT kukhompyutha yakho.
Indlela ngeke ulahlekelwe imiyalezo yakho yombhalo futhi
Indlela engcono kakhulu ukugwema ukulahleka kwedatha kuyinto isipele. Siphakamisa lokusebenza khulula ngokuthi SMS Backup & Buyisela.
1. Vula uhlelo lokusebenza bese uthinta isipele.
2. Khetha ukuthi ncamashi ufuna yakha ibhekhaphu, Bese uthepha Isipele Local kuphela. Kuyoba ugcine ifayela yokusekelayo kwisitoreji Android yakho. Uma ufuna ukuthumela ifayela lakho isipele ku-Google Drive, Eyinqolobane noma ikheli le-imeyili, ungakhetha ezinye.
3. Ukubuyisela izigijimi isipele kulula kakhulu, nje badonsa Buyisela phezu eliyisiqalo, bese wengeza ifayela yokusekelayo ohlwini. Uma uke alayishiwe isipele, badonsa imenyu phezulu ngakwesokudla, Bese uthepha Layisha kusuka.
Posted on September 8, 2015 September 11, 2015 Umbhali WillIzigaba Android Data RecoveryAmathegi Android Data Recovery, alulame isusiwe imiyalezo
Langaphambilini post Previous: Indlela Phinda Isuse Idatha kusuka Android Phone yakho
Next post Next: Indlela Phinda Isuse Izithombe kudivayisi yakho ye-Android